အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီးဖြစ်သူ H.E. Mr. Chen Hai ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ ‹ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီးဖြစ်သူ H.E. Mr. Chen Hai ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော် ၊ဇူလိုင် ၉ ရက်
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီးဖြစ်သူ H.E. Mr. Chen Hai ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား ယနေ့မွန်းလွဲ ၁၃:၃၀ နာရီ အချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ အဆိုပါဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမတွင် လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နှင့်အတူ အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ အမြဲတမ်း အတွင်းဝန် ဦးမျိုးအောင်၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးအေးလွင်၊ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့်တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး က ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ အဖြစ် ၂ ပိုင်းခွဲ၍ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါကြောင်း၊ မြန်မာ တရုတ်နယ်စပ်ဒေသများတွင် နယ်စပ်ဝင်ပေါက် ၈ခုမှ နှစ်နိုင်ငံ ပြည်သူများ ဝင်ထွက်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍ နယ်စပ်ဂိတ်များအား အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ရန် မိမိတို့ဖက်မှ ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါကြောင်း၊ အနာဂတ်တွင် နှစ်နိုင်ငံ ကူးသန်း သွားလာမှုပိုမိုများပြားလာနိုင်သည့်အတွက် လွယ်ကူချောမွေ့စွာ ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့် ရရှိရေးနှင့် အခက်အခဲများရှိပါက နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်း ဖြေရှင်းသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး က ဟောင်ကောင်နှင့်မကာအိုဒေသများမှမြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက် သူများအား ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံတစ်ခုလုံး အတိုင်းအတာအရ လူဦးရေ များပြားသည့်အတွက် အခက်အခဲရှိမည်ဆိုပါက ဦးစားပေးအနေဖြင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် ဒေသများအား ဦးစွာ ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိရေးဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါကြောင်း၊ ထို့အတူ မြန်မာနိုင်ငံ၏အကြိမ်ကြိမ်ဝင် ရောက်ခွင့်ဗီဇာ ကုန်ကျစရိတ်များပြားသည့်အတွက် ပြန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်ပေးစေလိုပါကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာသံရုံးမှဝန်ထမ်းများ၏မိသားစုဝင်များအား တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရမှဗီဇာကြေး ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ ဝန်ထမ်းများ၏ မိသားစုဝင်များအားလည်းထိုနည်းတူစွာဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါကြောင်း၊ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးက ရှင်းလင်းပြောကြားရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံရှိ အခြားသောဒေသများမှ ပြည်သူများ ကိုလည်း ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ၊ E -Visa များဖြင့်ခွင့်ပြုပေးလျှက်ရှိပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် တရုတ်ခရီးသွားများ အနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံသို့ ယခင်ကာလများထက်သွားရောက်မှု ပိုမိုများပြားလာပါကြောင်း၊ နယ်စပ် ဒေသများနှင့် ပတ်သက်၍ လတ်တလောတွင် နယ်စပ်ဖြတ်သန်းခွင့်လက်မှတ် (Border Pass –BP) နှင့်ယာယီနယ်စပ်ဖြတ်သန်းခွင့်လက်မှတ် (Temporary Boder Pass-TBP) ဖြင့် နှစ်နိုင်ငံပြည်သူ များသွားလာလျှက်ရှိပြီး နောင်တွင် ပတ်စပို့၊ ဗီဇာ ဖြင့်သွားလာနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ အနေဖြင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီစဉ်းစား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ဗီဇာကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှတဆင့် နှစ်ဘက်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ဗီဇာကြေးသည် တရုတ်နိုင်ငံတစ်ခုတည်းသာမဟုတ်ဘဲ အခြားနိုင်ငံများပါ တစ်ပြေးညီသတ်မှတ် ထားခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့အပြင် နှစ်နိုင်ငံပြည်သူများဝင်ထွက်ခွင့် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေး အတွက် ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာအမြင်ခြင်း ဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။